Saxiix: waa maxay, sidee u shaqaysaa maxaase na siiya si ka duwan WhatsApp iyo Telegram | Androidsis
Signal waa madal fariin ammaan ah Waxay qiraysaa farriimaha dhammaadka-dhammaadka, sidaa darteed gabi ahaanba qofna oo marin u heli kara farriimaha waddada ma marin karo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. In kasta oo ay run tahay in WhatsApp ay na siiso isla amniga, iyadoo ka mid ahaanshaha Facebook, asturnaanta ayaa su'aal laga qabaa.
Telegram, Dhanka kale, sidoo kale fariimaha ayuu sir ka dhigayaa kuwaas oo loo diro inta udhaxeysa isticmaaleyaasha, laakiin kaliya dhamaadka-ilaa-dhamaadka wadahadal qarsoodi ah. Waad ku mahadsan tahay hawlgalka Telegram, waxaan ku qaban karnaa wadahadalka aaladda kale, annaga oo ilaalinayna farriimaha ku kaydsan server-yada.
Si kastaba ha noqotee, taasi macnaheedu maaha in Telegram uu amnigiisa ka yar yahay. Fure u furaya farriimaha ku keydsan server-yada Telegram isku meel kuma xirna, marka qof shaqaale ah oo si muuqata uga shaqeeya server-yada maheli karo marin fure u ah wada-hadalkayaga.
Haddii aan rabno inaan adeegsanno wada sheekaysiga halkaasoo farriimaha lagu xirayo dhammaad ilaa dhammaad, looma baahna in la adeegsado Signal ama WhatsApp, maaddaama aan ka faa'iideysan karno sheekooyinka qarsoodiga ah ee Telegram na siiya. Wadahadallada noocan ahi waxay u shaqeeyaan si isku mid ah labada barnaamijba, iyadoon lagu kaydin farriimaha daruurta dhexdeeda, si markaa gabi ahaanba cidina u heli karin marinteeda.
1 Waa maxay Signal
2 Sidee Signal u shaqeeyaa
3 Hawlaha signalka
3.1 Farriimaha kooxda
3.2 Wicitaanada fiidiyowga ee ilaa 8 qof
3.3 Tirtir fariimaha la diray adigoon raad ka tagin
3.4 Wicitaanada maqalka
3.5 Nooca Desktop
4 Maxay yihiin howlaha gaarka ah ee ay siintu naga siiso?
4.1 In laga gudbo faaf-reebka dal
4.2 Farriimaha isla markaaba la tirtiro
4.3 Ku qari goobtaada wicitaanada
4.4 Soo diraha qarsoodiga ah
4.5 Waxay xaddidaysaa tirada jeer ee fiidiyoow ama muuqaal la daawan karo
4.6 Ogeysiisyo kala duwan oo loogu talagalay wadahadal kasta
4.7 Qari fariimaha shaashadda qufulka
4.8 Cid kale ma diiwaangelin karto lambarka taleefankaaga
4.9 Ka horjoogso soo diraha inuu qaato shaashadda shaashadda
4.10 Ka dhig wajiga sawirada aan wadaagno
5 Sida loo soo dejiyo Calaamadda
Waa maxay Signal
Calaamadda, sida Telegram, ayaa qof kasta bushimahiisa la saaraa markii WhatsApp uu si ku-meelgaar ah u joojiyo shaqada iyo / ama marka qof fadeexad cusub ee asturnaanta ayaa ku wareegsan barxadda, sidii horaantii 2021, markii ay shirkaddu soo tabisay isbeddelada lagu sameeyay shuruucda adeegga ee ay ku sheegtay inay la wadaageyso macluumaadka inta kale shirkadaha ka tirsan isla kooxdan: Instagram iyo Facebook.
Isbadaladaas úWaxay kaliya saameeyaan wadamada aan ka mid ahayn YurubWaad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in Midowga Yurub uusan u oggolaan shirkadda Mark Zuckerberg inay ku ciyaaraan xogta isticmaalaha markay doonaan.
Sannadkii 2014, codsigan farriinta waxaa loo yaqaan TextSecure, oo ah codsi kaas Edward Snowden ayaa amaanay waxqabadka xaga amaanka iyo arimaha gaarka ahba. Sannadkii 2015-kii, waxay magacii u beddeshay Signal.
Sidee Signal u shaqeeyaa
Signal waxaa lagu hayaa oo keliya tabarucaad si ay usii wadaan ilaalinta madaxbanaanidooda. Sida aan ka aqrin karno degelkeeda, marnaba ma aqbali doono lacagaha raasumaalka ah si ay mashruucu u ahaado mid waara
La Midowga Yurub wuxuu ku talinayaa isticmaalka Calaamadaha Codsi ahaan fariin lagu taliyay tan iyo 2020 mahadsanid xaqiiqda ah inay tahay il furan oo qof walba uu arki karo sida ay u shaqeyso iyo inay qarinayso fariimaha, wicitaanada iyo wicitaanada fiidiyowga min dhamaadka ilaa dhamaadka.
In kasta oo farriimaha sirta ah ee WhatsApp iyo Telegram ay na siinayaan isla shaqeynta, qaar badan ayaa ah saxafiyiinta iyo siyaasiyiinta kuwaas oo bilaabay inay adeegsadaan codsigan marka lagu daro adeegsadayaal aad iyo aad u tiro badan oo ka walaacsan asturnaantooda.
Signal wuu shaqeeyaa, sida WhatsApp oo kale la xidhiidha lambar taleefan, lambar taleefan oo aysan la xiriirin nooc kasta oo macluumaad ah oo la xiriira isticmaalka aan ka sameysanno barxadda. Intaas waxaa sii dheer, iyagu ma iibiyaan xogteenna si ay u bartilmaameedsadaan xayeysiinta ama u helaan faa'iidooyin siyaabo kale oo lagu ilaaliyo serverka.
Sida codsi wanaagsan oo qiime leh, Signal sidoo kale wuxuu noo ogolaanayaa inaan abuurno kooxo si aan ula wadaagno farriimaha, fiidiyowga, sawirrada, shucuurta, gifs ama nooc kasta oo nooc kale ah, oo ay ku jiraan faylasha nooc kasta ha ahaadeene.
Wicitaanada fiidiyowga ee ilaa 8 qof
Signal ayaa noo ogolaanaya inaan sameyno wicitaanada fiidiyowga oo ay la socdaan ilaa 8 qof. Dhammaan wicitaanada fiidiyowga waa dhammaad-ilaa-dhammaad qarsoodi ah, sidaa darteed gabi ahaanba cidina ma awoodo inay marin u hesho waxyaabahaaga.
Tirtir fariimaha la diray adigoon raad ka tagin
WhatsApp waxay caado u leedahay inay ku wargeliso qofka fariinta helaya soo diraha ayaa tirtiray fariin la soo diray, inkasta oo tan aan loo akhrin sida ay u dhacdo inta badan kiisaska markaan tirtirno fariin.
Hawlgalka Signal, sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka sida WhatsApp, had iyo jeer awood uma yeelan doonno inaan tirtirno farriimaha mar haddii la soo diro, tan iyo muddo ka dib, kaliya ikhtiyaarka ah in laga tirtiro sheekadeena ayaa la soo bandhigi doonaa. Hadday sidaas tahay, hadda waxba kama qaban karno tirtirida farriinta la soo diray.
Marka farriimaha aysan ku filneyn inay qaadaan wada hadal, Signal waxay noo ogolaaneysaa inaan wicitaano maqal ah sameyno, sidoo kale qarinaya IP-gaaga si markaa ay dhacdo in qof uu soo dhexgalo oo uu marin u helo IP-ga, nama heli karaan.
Codsi fariin ah oo aan bixinayn nooc web ama codsi, mustaqbal malahan. Signalku maahan mid iyaga ka mid ah oo codsi wanaagsan oo fariin ah, wuxuu na siinayaa nooc web ah si aan ugula socon karno wadahadalka si raaxo leh kumbuyuutar.
Maxay yihiin howlaha gaarka ah ee ay siintu naga siiso?
Signal, sida codsi kasta oo kale oo farriin ah, waxay na siisaa ficil ahaan isla shaqooyinka aan ka heli karno WhatsApp ama Telegram. Si kastaba ha noqotee, dabeecadeeda darteed diirada saaray arimaha gaarka ah, waxa kale oo ay na siisaa xulashooyin taxane ah oo aan laga helin labada madal, sida:
In laga gudbo faaf-reebka dal
Haddaan joogno waddan meesha barnaamijka waa faafreebaa, Waanu dhaqaajin karnaa ikhtiyaarka Iska ilaali faafreebka, oo ah shaqo dhaafaysa faafreebka dalka si laguu oggolaado inaad ku sii wadato adeegsiga dalabka xayiraad la'aan.
Doorashadan ayaa laga heli karaa qaybta Asturnaanta - Sare.
Farriimaha isla markaaba la tirtiro
In kasta oo WhatsApp iyo Telegram labaduba noo oggolaadaan si toos ah u tirtir fariimaha aan dirnoSaxeexa, waxaan gacanta ku dhigan karnaa waqtiga ay tahay in ladhaho madaama fariimaha aan dirno la aqrinayo si loo sii wado tirtirka.
Waqtiga ugu yar ee aan dejin karno marka qofka qaata uu akhriyo fariimaha ilaa inta laga tirtirayo waa 5 ilbiriqsi oo ah ugu badnaan hal toddobaad.
Ku qari goobtaada wicitaanada
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo ay Signal na siiso waxaa laga helaa suurtagalnimada rwax ka beddel wicitaannada codka waxaan sameynaa, shaqo ku habboon si looga fogaado muujinta cinwaanka IP-ga.
Soo diraha qarsoodiga ah
Ikhtiyaarka Diraha Qarsoodiga ah wuxuu ka horjoogsadaa serverka Signal inuu ogaado yaa diraya fariimaha si qofka kaliya ee qaabila ay u ogaadaan cida ka soo dirtay taleefoonadooda.
Haddii aan dhaqaajino hawsha Allow qof kasta, waan awoodi doonnaa inaanu rhel farriimaha dirista sirta ah dadka aan ka mid ahayn xiriiradayada iyo kuwa aan waligood wadaagin astaantayada, markaa waa mid ka mid ah codsiyada ugu badan ee ay isticmaalaan saxafiyiinta.
Waxay xaddidaysaa tirada jeer ee fiidiyoow ama muuqaal la daawan karo
Markii aan wadaagno sawir ama muuqaal, waan awoodnaa deji xadka ugu sarreeya ee aragtida aan xad lahayn sida dhammaan codsiyada farriimaha ama xaddid bandhigga hal waqti.
Ogeysiisyo kala duwan oo loogu talagalay wadahadal kasta
Hawl aan codsi kale haysan waa suurtagalnimada in la awoododhigay wargelin ka duwan wadahadal kasta oo aan ku yeelanno arjiga, kaasoo noo oggolaanaya inaan ku garanno cod ahaan, cidda fariinta aan helnay ay u dhigantaa.
Qari fariimaha shaashadda qufulka
Hawl kale oo aad u faa'iido badan oo ku jirta Signal ayaa laga helay suurtagalnimada ka qari labada soo diraye iyo fariinta ogeysiiska shaashadda qufulka ee xarunteena. Xitaa haddii aan furno boosteejada, ogeysiinta ayaa sii wadi doonta muujinta qoraalka "farriin cusub" iyada oo aan la tusin soo diraha ama qoraalka.
Sida kaliya ee lagu heli karo nuxurka ogeysiiska ayaa ah fur codsiga, codsi aan ku ilaalin karno habka furaha, marinka faraha, iyada oo loo marayo aqoonsiga wajiga ...
Cid kale ma diiwaangelin karto lambarka taleefankaaga
Haddii aan ku darno PIN koontadeena Signal, ma jiro qof naga mid ah oo awood u yeelan doona iska qor lambarka taleefankeena, hawl ku habboon si aan cid kale oo naga mid ahi u isticmaali karin koontadayada 'Signal'.
Sidan oo kale, haddii qof na daaweeyo xado akoonkaMarnaba sidaas ma sameyn kartid illaa aad ka ogaato lambarka sirta ah ee PIN ee aan horey u sameynay si aan u ilaalino koontadayada.
Ka horjoogso soo diraha inuu qaato shaashadda shaashadda
Signal wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku xirto arjiga kuwa diraya fariimaheena ma qaadan karo shaashadda wada hadalada aan yeelanay.
Ka dhig wajiga sawirada aan wadaagno
Run ahaan ujeeddadeedu waxay diiradda saartay asturnaanta, marka la wadaagayo sawir, dalabka ayaa noo oggolaanaya si toos ah u qariya wajiyada dadka in la muujiyo iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo tifaftiraha sawirka ee taleefannada casriga ah.
Sida loo soo dejiyo Calaamadda
Sida dhammaan codsiyada farriimaha ee hadda laga heli karo suuqa, Signal ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash Mana kujirto nooc kasta oo xayeysiin ah ama rukumo ah, ugu yaraan inta aad ku sii noolaan karto tabarucyada.
Si aad ugu raaxeysato codsigan, oo ka badnaa 50 milyan oo laga soo dejiyay Play Store dhowr bilood ka hor, casriga casriga ah ee Android Waa in lagu maareeyaa Android 4.4 ama wixii ka dambeeya.
Calaamadda ayaa u eg kordhiya shuruudaha ugu yar ee Android mustaqbalka, laakiin, waqtiga la daabacayo maqaalkan, Abriil 2021, waa kuwa aan ku tilmaamay sadarka hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Signal: waa maxay, sida ay u shaqeyso iyo waxa ay na siiso si ka duwan WhatsApp iyo Telegram
Photocall TV: Sida loogu daawado TV-ga Android bilaash